Vechidiki - Voice of America
Mutevedzeri wemutauriri webato iri, VaGift Ostallos Siziba, vaudza Studio7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza2018
Mumwe wevabereki ava, VaBernard Mujeyi, avo vane mwana ane makore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupiwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association.
Chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chasaririra zvikuru murwendo rwe makundano e2023 World Cup zvichitevera mitambo yakaitwa nezuro.
Ndira 13, 2022
Nyanzvi Dzinoti Mapato Akasiyana Anogona Kushandisa Zita Rakafanana Musarudzo
Nyanzvi munyaya dzesarudzo dzinoti hapana mutemo unopa Zimbabwe Electoral Commission kuramba kutambira mapato maviri ane zita rimwe chete kuti akwikwidze musarudzo kunyange hazvo zvichivhiringa vanhu vanovhota
Zanu PF Yogadzirira Sarudzo Dzichaitwa Muna Kurume
Muchiziviso kunhengo dzebato ravo, murongi wemisangano muZanu PF, VaMike Bimha, vati Zanu PF ichapinda musarudzo dze by-elections nekudaro vese vanoda kumirira bato vanofanira kuendesa magwaro avo kumahofisi ebato iri mumatunhu avo.
VaJohn Mupanduki Vanowanikwa Vari Vapenyu, Asi Vakatochwa
Nhengo yeMDC Alliance, VaJohn Mupanduki, avo vakapambwa musi weChishanu, vanonzi vakasiya vakandwa kumucheto kwemugwagwa pedyo nedhorobha reMashava nezuro mushure mekutochwa zvakaipisisa nevanhu vakavapamba.
Nhengo yeMDC Alliance Inopambwa Mambakwedza kuMasvingo
Nhengo yeMDC Alliance, VaJohn Mupanduki, vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo paNyika Growth point kuBikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati.
Zanu PF Inosarudza Mudzimai Mumwe Chete Chete Kuva Sachigaro weDunhu
Zanu PF yazivisa zvakabuda musarudzo dzekutsvaga vatungamiriri vematunhu asi ikati vakakunda havafanirri kupemberera pari zvino kudzamara dare rePolitiburo ratambira zvakabuda musarudzo idzi.
Zanu PF Yononoka Kuburitsa Zvakabuda Musarudzo Zvichitevera Kukakavadzana Kuri Kuitika
Bato reZanu PF rinoti richiri pakati pekuongorora zvichemo zvevakakwikwidza musarudzo dzemapurovhinzi ebato iri dzakaitwa neChipiri risati razivisa zvakabuda musarudzo idzo dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka mune mamwe matunhu.
Zanu PF Inoita Sarudzo dzeKutsvaga Hutungamiri hweMatunhu
Sarudzo dzebato reZanu PF dzekutsvaga vatungamiriri vematunhu dzaitwa nhasi mumatunhu ose emunyika, uye zvizhinji zvabuda musarudzo idzi zvihaziviswa mangwana.